अस्पतालको लापरबाहीले बाबालाई गुमाउनु पर्‍यो : कमेडियन आदर्श मिश्र- समाचार - कान्तिपुर समाचार
अस्पतालको लापरबाहीले बाबालाई गुमाउनु पर्‍यो : कमेडियन आदर्श मिश्र
'एनएमसी र नारायणी अस्पतालले मिलेर खाइदिए एउटा मान्छेको जीवन । अब कतिजनाको खान्छन् मलाई थाह छैन ।'
जेष्ठ १२, २०७८ रीना मोक्तान
काठमाडौँ — कमेडियन आदर्श मिश्रले वीरगन्जको नेसनल मेडिकल कलेज र नारायणी सरकारी अस्पतालको लापरबाहीले आफ्ना पिता विनोद मिश्रको ज्यान गएको आरोप लगाएका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा भिडियो सार्वजनिक गर्दै उनले दुई अस्पतालको लापरबाहीले बुबाको ज्यान गएको आरोप लगाएका हुन् । 'बाबा हुनुहुन्न अब । अनि मेरो बाबाको अवस्था यस्तो हुनुको पुरै जिम्मेवार म नेसनल मेडिकल कलेज ‍(एनएमसी) र नारायणी सरकारी अस्पताललाई मान्छु । किनभने बाबालाई दुई हप्ताअघि डायलसिसका लागि लैजाँदा एसपीओ टु (अक्सिजन स्याचुरेसन) ९० छ, तपाईंको डायलसिस यहाँ हुँदैन भनेर अस्पतालबाट निकालिदिएको हो,' उनले भनेका छन्, 'चार वर्ष मेरो बाबाले एनएमसीमा डायलाइसिस गराउनुभएको हो । डायलसिसबापत ३५ सय सरकारबाटै तिनीहरुले उठाएको हो । कमाउने बेला तिमीहरूले कमाउने ? बिरामीलाई गाह्रो भएको बेला धपाइदिने ? त्यहाँ मेसिन र डायलुजर केही पनि काम लाग्दा छैनन् ।'
एनएमसीको डायलसिस मेसिनलगायतको कन्ट्याक्ट लिएको नेफ्रो प्लस (भारतीय कम्पनी)ले पैसा बचाउन धाँधली गरेको पनि उनले आरोप लगाएका छन् । 'गर्त वर्ष नारायणीमा कोभिड वार्ड बनाउँदा त्यहाँको डायलसिस बिरामीलाई एनएमसीमा सिफ्ट गरिएको थियो । एक महिनाभित्र पाँचजना बिरामी मरेका थिए, डायलुजर मेसिन नफेरेर । नेफ्रो प्लसले पैसा बचाउन अत्यन्तै धाँधली गरिरहेको छ,' उनले भनेका छन्, 'एनएमसी अस्पतालाई गत वर्ष केन्द्रबाट २० प्रतिशत बेड कोभिड संक्रमित बिरामीका लागि छुट्याइदिनु भनेर निर्देशन आएको थियो । तर, एनएमसीले ‘म केन्द्रको आदेश मान्दिनँ’ भन्यो । किनभने एनएमसीको फाउन्डर बसुरिद्धिन अन्सारी हो । अनि, बसुरिद्धिन अन्सारी लास्टै नै पावरफुल मान्छे हो । उहाँको गुन्डागर्दी अति नै धेरै चल्छ । उहाँलाई केरमेट गर्ने कोही पनि छैन । बसुरिद्धिन यति पावरफुल मान्छे हो कि गत वर्ष केपी ओलीको मिर्गौला प्रत्यारोपणमा जति पनि खर्च भएको हो, व्यक्तिगत रुपमा सबै बसुरिद्धिनले व्यहोरेको हो ।'
एनएमसीको गुन्डागर्दीले आफूले बुवा गुमाउनु परेको उनको आरोप छ । 'अब हुनुहुन्न मेरो बाबा आज । यसको कुनै सुनुवाइ छैन । कोही पनि माथि छैन । छानबिन हुन्छ, हुँदैन । काठमाडौंबाट आएर ‘तँ एउटा मेडिकल कलेज चलाउनलाई योग्य छस् कि छैनस्’ भनेर चेक गर्ने कोही पनि छैन,' उनले भने,'पैसामात्रै भएर हुन्छ ! पैसा मात्र हुने भए त पैसैको त्यस्तो कमी थिएन मलाई । मान्छे हुन्थ्यो अहिले मेरो घरमा नि ! नारायणी अस्पतालले यस्तो बेलामा प्रतिशोधको कार्ड खेलिरहेको छ । नारायणी अस्पतालले के गरिरहेको छ भने यदि एनएमसीले आफ्नो बिरामीको डायलसिस आफै गर्दैन भने हामी किन गर्ने ?'
एनएमसीको नर्सको लापरबाहीलाई पनि उनले भिडियोमा उल्लेख गरेका छन् । 'एउटा मेसिन बिग्रिँदा त्यहाँ काम गर्ने नर्स दिदीले फोन गरेर भाइ दुवै मेसिन बिग्रियो भनेर अफवाह फैलाउनेलाई कारबाही हुने कि नहुने ?' भाइ, सूचना नै निकालिसक्यो । सूचना त आएकै थिएन,' उनी भन्छन्, 'डाक्टरले ब्रेनमा युरिया पुगिसक्यो चार घण्टा डायलसिस गर्दिनु भन्दाखेरी डाक्टरको अगाडि चार घण्टाको समय सेट गर्ने अनि डाक्टर गइसकेपछि तीन घण्टा बनाइदिने त्यसलाई । दिदी हजुरलाई छिटो घर पुग्नु थियो होला । तर, कोही मान्छे घर पुगेनन्, तपाईंको एक घण्टाको हतारले गर्दा ।'
रातभर डाक्टरलाई गुहार्दा पनि बुबा बचाउन नसकेको आदर्श बताउँछन् । 'बाबालाई बचाउन सकिन्थ्यो होला । गलत निर्णय लिए हुँला । काठमाडौं लिएर जानुपर्ने थियो होला । भरतपुर अस्पतालमा रातभरी डाक्टरलाई ‘सर १ सय ५ ज्वरो छ सर, बाबालाई होस छैन सर’ भनिरहें,' अवरुद्ध गलामा अस्पतालको समय उनी सम्झन्छन्,' उहाँले, ‘एसपीओ ठीक छ, भाइटल्स ठीक छ' भन्नुभयो । आईसीयूमा राख्दिनुन सर भन्दाभन्दै बिहानको १० बजे बुबा बित्नुभयो ।' एसपीओटुमात्रै ठीक भएर यदि कोभिडको उपचार हुने भए त अक्सिमिटर लिएर म नि डाक्टर हुन्थे नि सर, किन स्ट्यान्डअप गरिरहन्थे !'
किड्नी फेल भएको अवस्थामा पनि बुवा मिश्राले नवल विद्यालय सुविधायुक्त बनाएको उनको दाबी छ । त्यसैले उनी प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई कुर्सी छाड्न चुनौती दिन्छन् । 'केपी ओलीले त छोड्दिए हुन्छ नि कुर्सी । मेरो बाबा हप्ताको दुई दिन डायलसिस गराउन स्कुटर पछाडि बसेर गएको हो । तर पनि मेरो बाबाले चलाएको विद्यालय हेर अनि तिमीले चलाएको देश । अनि पनि लाज लाग्दैन भने मलाइ भन ।' थपे, 'काम गर्न दिएनन् मलाई भन्छौं । काम गर्न मन कहाँ छ तिमीलाई ? त्यो पर्दैन भन्दै बस्ने काम हो तिम्रो । भेडाहरू पछाडि जम्मा गर्‍या छौ । त्यही हुल बोकेर भारतको विरुद्धमा बोलेर ‘ब्याक अफ मोदी’ भन्नेबित्तिकै एक हुल नेपाली पछाडि लागिहाल्छन् । त्यही सेन्टीमेन्टमा जित्यौं तिमीले चुनाव । मधेसी नेताहरुभन्दा राम्रो छु भन्ने मात्र प्रमाणित गरेको हो तिमीले । तर, तिमी इत्ति नि राम्रो नेता होइनौं ।'
बाबा बितिसकेपछि परिवारसामु उनको मृत्युबारे ढाँट्न बाध्य भएको दु:ख उनले भिडियोमा पोखेका छन् । 'मैले धेरै ढाट्या छु घरमा । अनि यसपाली ढाट्नचाँहि जरुरी थियो । यसपाली ढाँट्दा समातिएको भए धेरै गाह्रो हुन्थ्यो । मेरो ममीले भित्तामा हात हान्ने टाउको ठोक्ने गरिसक्नुभएको थियो । अहिले पनि डिप्रेसनको औषधि खानुहुन्छ उहाँ,' उनले भनेका छन्, 'बाबाको शव जितपुर लिएर आउनुपर्ने भयो । बाबा बित्नुभयो भन्ने थाह पाउनुहुन्छ भनेर ममीलाई ‘यहाँ भेन्टिलेटर छैन, नारायणी अस्पतालमा व्यवस्था भएको छ, त्यहाँ जाऔं बाबाको उपचार त्यहाँ हुन्छ भनेर बाबाको शव लिएर गयौं ।'
प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा बाबाको अघि स्ट्यान्डअप कमेडी गर्ने सपना अपूरो भएको भन्दै आदर्शले फेरि आफू खाँचोमा परेकाहरुको सहयोगमा जुट्ने प्रण गरे । 'एनएमसी र नारायणी अस्पतालले मिलेर खाइदिए एउटा मान्छेको जीवन । अब कतिजनाको खान्छन् मलाई थाह छैन। तर, लड्न प्रयास जारी राखौं । जति जीवन बचाउन सकिन्छ, बचाऔँ,' उनले भने, 'मबाट जति हुन्छ, म गर्न तयार छु । मलाई १०–१२ दिनको समय चाहिन्छ होला । किरियाकर्महरु सकिएर तपाईंहरुको सहयोग पोस्टहरु, अक्सिजन आवश्यकता पूरा हुन्छ ।'
प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०७८ २०:११
आफ्नै कोठा मञ्च
छरिएर बसेका पात्रहरु जोड्ने नाटक 'अनुपस्थित तीन'
जेष्ठ ११, २०७८ रीना मोक्तान
काठमाडौँ — रंगकर्मी पवित्रा खड्काले सधैं मञ्चमा अभिनय गरिन् । यसपटक पनि उनी मञ्चमै छिन् । तर दृश्य बदलिएको छ । दर्शकदीर्घाका कुर्सीहरु खाली छन् । शिल्पी थिएटर बाहिर सन्नाटा छ । त्यही खाली कुर्सीलाई दर्शक मान्दै उनी नाटक अभ्यास गर्दैछिन् । फ्रान्सेली नाटककार जाँ-पाल सार्त्रको 'नो एक्जिट'को नेपाली अनुवादित नाटक 'अनुपस्थित तीन' मा अभिलासाको चरित्र उनी निभाउँदै छिन् । अभिलासा तेस्रो लिङ्गी भावना बोकेकी पात्र हुन् ।
जेठ १२ मा यो नाटक युट्युबबाट लाइभ स्ट्रिमिङ हुनेछ । भर्चुअल्ली मञ्चन हुने नाटकमा कलाकारले आ-आफ्नो घरबाटै अभिनय गर्नेछन् । उनीहरुले आफ्नो कोठालाई मञ्च बनाएका छन् । पवित्रा भने शिल्पीकै मञ्चबाट देखिनेछिन् । यसअघि दर्शकको प्रतक्ष उपस्थितिमा अभिनय गर्थिन् पवित्रा । यसपालि ल्यापटपको अगाडि अभिनय गर्दै नौलो अनुभव बटुल्दै छिन् ।
'नाटक गरिरहेको व्यक्तिलाई यी प्राविधिक कुराहरुमा अविश्वास लाग्दो रहेछ । ल्यापटपको क्यामेरामा बाँधिएर काम गर्नुपर्दा चुनौती छ, 'उनले अनुभव साटिन्, 'मञ्चमा त अन्य कलाकारको शारिरिक हाउभाउ र एक्सप्रेसन देखिन्छ । तर अहिले भर्चुअलमा उनीहरुले यसरी गरेका होलान् भनेर सोच्दै अभिनय गर्नुपर्छ ।'
पवित्राको एउटै चाहना छ, 'अभिनय गरिरहँदा इन्टरनेट नजाओस् । बत्तीले साथ देओस् ।'
पर्फमेन्स आर्टिस्ट सलिल सुवेदीलाई भर्चुअल नाटक नयाँ बाजा सिकेझैं भएको छ । 'नाटकको मर्म भनेकै टिमवर्क हो । त्यसमा विश्वासको कुरा आउँछ । सहयोग, जिम्मेवारीका मुख्य कुरा आउँछन् । त्यो कुराहरु टाढा बसेर गर्दा पनि हुन त हुँदो रहेछ,'उनले भने,'टिममा सँगै काम गर्दा तुना फुस्क्यो भने सहयोग गर्ने हुन्छन् । तर अहिले केही खुस्किहाल्यो भने आफैले मिलाउनुपर्छ । त्यही कुरा मिस भइरहेको छ । तर संगीतकारको हिसाबले कुरा गर्दा कुनै नयाँ बाजा सिकेझैं भइरहेको छ ।'
नयाँ बाजा पहिलो पटक हातमा लिँदा एक किसिमको अप्ठ्यारो अनुभव हुन्छ । कतिले १/२ पटक सिकिसकेपछि बाजा छोडिदिन्छन् । तर थोरै जसले पछिसम्म बाजालाई बानी बनाउँछ त्यसपछि कलाको सिर्जना हुन्छ । भर्चुअल नाटकबाट भोलिका दिनमा 'गज्जब' अभिव्यक्ति निस्कन सक्ने सलिलको भनाइ छ ।'नयाँ पुस्ता जो यसमै भोलि भयंकर गर्छु भन्दै निस्किएला कि । जसरी फर्ममेन्स आर्ट जन्मियो । कलाको छुट्टै शैली जन्मिन सक्छ कि !,' उनले भने ।
घरबाटै नाटक गर्नुपर्दा सलिलका जिम्मेवारी भने बढेका छन् । क्यामेरा एंगल आफै मिलाउँछन् । लाइट मिलाउनै पर्‍यो । कोरियोग्राफी आफै गर्छन् । रंगमञ्चमा भए यी कुराको व्यवस्थापन अरुले गर्थे । यसरी काम गर्दा सलिल जिज्ञासु पनि बनेका छन् । 'दर्शकले मन पराउला नपराउला, तर यो यस्तो अवसर हो । यसरी प्रस्तुत हुँदा के हुन्छ थाहा छैन । तर म प्रयोग गर्न रुचाउने कलाकार हुँ । यो नौलोपनभित्र काम गर्न मलाई त एकदमै रमाइलो भइरहेको छ,' उनले सुनाए ।
भर्चुअल रंगमञ्च वास्तविक रंगमञ्च होइन भन्ने उनी जान्दछन् । रंगमञ्चको मर्मभित्र बसेर भर्चुअल नाटक गर्नभने चुनौतीपूर्ण रहेको उनको अनुभव छ । अस्तित्ववादको यो नाटकमा पात्रहरु विरोधाभास छन् । उनीहरु आफ्नो अस्तित्व खोजिरहेका छन् । नर्कमा पुग्दा पनि त्यहाँ उनीहरुलाई अस्तित्वको ख्याल छ । सलिल आजादको चरित्र निभाउँदैछन् । आजादलाई मरिसकेपछि 'मेरो गाथा के हुने होला' भन्ने ठूलो चिन्ता छ । आजाद आफूले गरेको कुरालाई राम्रो हो भनेर देखाउन खोजिरहेका छन् । अर्कोतिर कुकर्मले ग्लानी पनि ।
भर्चुअल रंगमञ्च सलिलका लागि पनि नौलो हो । हुन त यसअघि उनले फर्फर्मेन्स आर्टिस्ट र केही कविहरुसँग मिलेर 'साइलेन्ट मिटिङ' गरेका थिए । कोठाबाट भर्चुअल कन्सर्ट पनि गर्दै आएका छन् । 'अनुपस्थित तीन'को अभ्यासले प्रविधिसँग अझै घनिष्ट बनाएको उनी सुनाउँछन् । 'महामारीपछि संसारले एक किसिमको नयाँ जन्म पाउँदैछ । हामी रंगमञ्च मात्र हुने भनेर बस्नु भन्दा यो वैकल्पिक रंगमञ्चमा किन भाग नलिने त ?' उनी प्रश्न गर्छन् ।
'अनुपस्थित तीन' मा इच्छाको चरित्रमा अभिनय गर्दै छिन् उषा रजक । २ वर्ष अघिदेखिको 'रिदम एन्ड सोल विथ उषा रजक' कोरोनाकै कारण अलमलमा पर्‍यो । फिल्मका कामहरु बन्द भएपछि उषा खाली थिइन् । यो नाटकले उनमा आसा जगाइदिएको छ । 'अन्य कलाकारझैं म पनि बेरोजगार थिएँ । यो नाटकले आसा जगाइदिएको छ । दैनिक अभ्यास गरिरहेका छौं हामी,'उषा सुनाउँछिन्,'धेरै कुरा ओझेलमा परेको बेलामा यसले यथार्थ बोकेको छ । यो नाटक साकार हुनेवालामा छ । खुसी छु ।'
'अर्को कुरुक्षेत्र' पछि पहिलो पटक शिल्पी थिएटरसँग मिलेर उनी अभिनय गर्दैछिन् । फिल्महरुमा काम गरेको अनुभवकै कारण क्यामेरा उनको लागि असहज भएको छैन । तर कोठालाई मञ्च बनाउँदै गर्दा आफ्नो घरलाई राम्ररी चिन्दैछु भन्ने उनलाई लागेको छ । यसरी भर्चुअली मञ्चन हुने नाटक ऐतिहासिक हुन्छ भन्नेमा उनी उत्साहित छिन् ।
'नयाँ अनुभव हो । हामी लाइभ जाँदैछौं । रंगमञ्चमा हामीले नाटक पाउँदा प्रत्यक्ष दर्शकबाट हामी उर्जा पाउँछौं । भर्चुअलमा हामीलाई उहाँहरुबाट नै उर्जा मिल्ने हो । करोडौंको बजेट भएको प्रोजेक्ट रोकिएको बेला यो यथार्थमा आउँदै छ,' उनले भनिन्,'डिजिटल प्लेटफर्म चलाउन हामीलाई सजिलो छैन । तर अहिले अरु उपाय पनि त छैन ।'
मानाहाङ लावती नाटकका अर्का पात्र हुन् । यसअघि क्यामेरामा अभिनय नगरेका उनका लागि 'अनुपस्थित तीन' बिल्कुलै नयाँ अनुभूति हो । 'अनलाइनबाट नाटक गर्दा केही नयाँ अनुभव बटुलिरहेका छौं । जे होस् त्यो पनि सिकाइ भइरहेको छ । नयाँ स्वाद लिन पाइरहेको छु,'उनले भने,'रंगमञ्चमा क्यामेराको एंगल हेर्न पर्दैन । मैले अगाडि क्यामेरामा काम गरेको थिएन । डर पनि लागिरहेको छ ।' रंगमञ्चको भर्चुअल स्वरुपमा काम गर्दा रमाइलो लागेको मानाहाङ सुनाउँछन् ।
अवतार पाठकले अनुवाद गरेको यस नाटकलाई निर्देशक घिमिरे युवराजले निर्देशन गर्दैछन् । रंगमञ्चको विकल्प खोज्ने क्रममा उनले भर्चुअल रंगमञ्च रोजेका हुन् । यसअघि नाटकलाई थिएटरमै देखाउने उनीहरुको योजना थियो । शिल्पीमा सेट बनिसकेको थियो । ३० दिनजति रिहर्सल गरेपछि देशमा लकडाउन भयो । हुन त भर्चुअल्ली चार सो गरेपछि नियमित मञ्चनमा जाने योजना थियो । तर कोरोनाले सिर्जेको परिस्थितिमा भर्चुअल्ली दर्शकबीच पुग्ने सोचे ।
'हामी त काममा छौं । स्थिति खराब छ । तर यो विकल्प हामीले खोजेका हौं । रिहर्सल अनलाइन गरिरहेका छौं । सबै कलाकार फरक फरक ठाउँमा हुनुहुन्छ । एउटा पात्रले अर्कोलाई बस्नुस् भन्दै कुर्सी दिँदा अर्को ठाउँमा रहेको पात्रले फ्रेमभन्दा बाहिरबाट अर्को कुर्सी लिन्छ । यो माध्यममा नाटक गर्न रमाइलो भइरहेको छ,' उनले भने,'प्रभाव कस्तो होला भन्ने चिन्ता नलिइ कलाकारहरु काम गरिरहेका छन् । भोलि स्टेजमा काम गर्न यस्तो बेला सिर्जनशील भएर बस्नु पर्‍यो नि । यस्तो क्रियाकलापले ती कलाकारलाई जीवित राख्छ ।'
प्रकाशित : जेष्ठ ११, २०७८ १४:५८